Atletisma: tsy mbola afaka mamonjy an’i Maorisy i Todisoa | NewsMada
Mampikorontana ny fiainan’ny atleta malagasy ny tsy fisian’ny sidina mihazo ireo Nosy manodidina. Vokany, tsy mbola afaka mamonjy ny ivontoeram-piofanana atsy Maorisy i Franck Todisoa.
Hatreto, mbola tafajanona eto an-tanindrazana Rabearisoa Todisoa Franck, atleta miofana ao amin’ny ivontoerana atsy Maorisy na ny Centre africain de développement de l’athletisme (Cada). Noho ny tsy fisian’ny sidina mihazo an’io Nosy rahavavy io ny anton’izany. Ankoatra izay, araka ny vaovao voaray, tsy mbola nahazo fahazoan-dalana avy amin’ny tomponandraikitra maorisianina ny tovolahy.
Tokony efa ho tamin’ny faha-15 febroary lasa teo i Todisoa Franck no hamonjy ny toeram-piofanana, atsy Maorisy. “Miandry ny fisian’ny sidina manaraka ny tenako, izay tsy mbola fantatra ny fotoana hisiany”, hoy i Todisoa Franck.
Marihina fa anisan’ireo tavela eto Madagasikara ihany koa i Claudia Nomenjanahary, tokony hiatrika ny fiofanana atsy Maorisy, miaraka amin’i Todisoa Franck. Manoloana izao tranga mahazo ireto atleta ireto, mampirisika azy ireo hanohy ny fanazarantena i Stephan Buckland, tompondakan’i Maorisy amin’ny 100 m, mpanazatra ao amin’ny Cada. Ny alahady lasa teo, efa nisy ny fihaonana fanomanana notanterahina tao amin’ny kianja Maryse-Justin tao Réduit, izay efa tsy natrehin’izy mianadahy.
Tsiahivina fa tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny 400 m ary nandrombaka ny medaly volamena, nandritra ny “Lalaon’ny Nosy”, natao tany Maorisy ny taona 2019, i Todisoa Franck.